राजनीतिक प्रबन्धमा विस्थापित विज्ञता - Bishwo Khabar
पार्टीभित्रका नेताहरूको दाबी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले किन खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री बनाउनुभयो ? पार्टीभित्रका अनुभवी र तुलनात्मक सकारात्मक छवि भएका नेतालाई छाडेर खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु एकप्रकारले राजनीतिक जोखिम पनि थियो । त्यसमा पनि भावनात्मक एकता नभइसकेको, एक–अर्काप्रति विश्वास कायम हुन नसकेको र जनताको अतिरिक्त अपेक्षा भएको अवस्थामा झनै खतरा थियो । तर, त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको विकासको सोचसँग जोडिन्छ । विकसित नेपालको ओली कल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने एक मुख्य पात्रका रूपमा खतिवडा छनोटमा पर्नुभयो । विकास र समुन्नतिका लागि राजनीतिको सीमित घेराभन्दा अलि पर हेर्ने ओलीको दूरदृष्टिको परिणाम थियो– खतिवडाको आश्चर्यजनक राजनीतिक प्रवेश । राजनीतिमा आफूप्रति विश्वास भएको र जोखिम उठाउन सक्ने नेताले मात्र यस्तो निर्णय लिन सक्छ ।
इतिहासमै शक्तिशाली दुईतिहाइ शक्तिको कम्युनिस्ट सरकारको गठन र संविधानमै उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था र राज्य प्रणाली । ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’को लक्ष्य । एउटा ऐतिहासिक अवसर नेपालका सामु थियो-छ । त्यही भएर उहाँले अर्थतन्त्र बुझेको, देश–विदेशका आर्थिक नीति र विकाससँग साक्षात्कार भएको र लगानी भिœयाउन सक्ने दाताहरूसँग समेत सम्बन्ध राम्रो भएको ‘टेक्नोक्रेट’-बौद्धिकलाई अर्थमन्त्री बनाउनुभयो । पहिलो नौमहिने कार्यकालमा प्रतिकूल घरेलु र बाह्य अवस्थासँग जुध्दै मुर्छित सपना व्युँताउन सफल प्रधानमन्त्री ओली व्युँतिएका सपनालाई ‘एक्सन’मार्फत यथार्थ बनाउन चाहनुहुन्थ्यो ।
पहिला यी चार साङ्केतिक सूचक हेरौँ ।
पहिलो, आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धि । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम भएको छ । ०७४÷७५ मा व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३८ प्रतिशत रहेकोमा ०७५÷७६ मा पनि ३८ प्रतिशत भयो भने ०७६÷७७ मा २९ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो । यसले गर्दा चालु खाता घाटा, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भयो । यो सकारात्मक प्रारम्भ हो ।
दोस्रो, यो सरकार गठनपछि आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक छ । २०७४÷७५ मा ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा २०७५÷७६ मा ७ प्रतिशत रह्यो । कोभिड महामारीका बाबजुद २०७६÷७७ को आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा रह्यो । जब कि विश्वका १७० देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को छ ।
चौथो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रह्यो । सरकार गठनअघिको मुद्रास्फीति एक दशकको औसत ९ प्रतिशत रहकोमा सरकार गठनपछिको तीन वर्षमा औसत ५ प्रतिशत तल सीमित रहेको छ । नेपालको मूल समस्या मुद्रास्फीति पनि हो, यो नियन्त्रण भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्ष र दोस्रो वर्ष प्रस्थान वर्षका रूपमा रह्यो । आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारका लागि आधारशिला खडा गर्ने काम भयो, तिनलाई अघि बढाउने काम पनि भयो र महामारीले प्रभाव पारे पनि अब ती सम्पन्न हुने चरणतर्फ उन्मुख छन् । चौतर्फी आक्रमणका बाबजुद डा. खतिवडाले क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक जग बलियो बनाउने प्रयास गर्नुभयो । कार्यशैली व्यक्तिगत हुन्छन्, कसैलाई मन पर्न वा नपर्न सक्छन् । ‘टेक्नोक्रेट’हरूको परामर्शको दायरा सीमित नै हुन्छ ।
सबैभन्दा उपयुक्त प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकाहरूले अर्को निर्वाचनसम्म पर्खेको भए हुन्थ्यो र त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्थ्यो । नेतृत्वको माथिल्लो तहमै पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा प्रवेश गरेपछि अहिले वामदेव गौतम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ।
व्यक्तिका रूपमा वामदेव र नारायणकाजी राष्ट्रियसभामा रहँदा सभाको गरिमा बढ्छ नै किनकि यो उचाइका नेताको त्यहाँ कमी छ । तर, टिप्पणी गर्नेहरूले इतिहासमा लेखिरहन्छन्– ‘प्रतिनिधिसभामा हारेपछि राष्ट्रियसभामा जानेहरू वामदेव र नारायणकाजी ।’ उहाँहरू सांसद बन्दा विरोध गरिहाल्नुपर्ने केही छैन किनकि संसद्को रसायनमा ताŒिवक फरक पर्दैन, न त उहाँहरूको योगदानका सन्दर्भमा । तर, विधि र पद्धतिको ‘कस्मेटिक’ नारा पदसँगको बार्गेनिङ हो भन्ने प्रमाणित नगर्दा उहाँहरूकै लागि उचित हुन्थ्यो ।
Previous articleरेडक्रसमा करोडौं हिनामिनाः १६ अर्बको हिसाबकिताब गोलमाल
Next articleप्राकृतिक जीवन शैली बिताए कोरोना जस्ता भाइरसबाट बचिने